Lawula unxibelelwano lwakho kwiinethiwekhi zeWi-Fi ngendlela elula nekhululekileyo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ukuqhagamshela kwinethiwekhi ye-Wi-Fi kunye neefowuni zethu ze-android kufuneka sisebenzise unxibelelwano nokuba lusebenzisa iwijethi esiyibeka kwidesktop yethu okanye nge «imenyu - useto - ngaphandle kwamacingo - wifi ». Okwangoku i-terminal iya kuqala ukukhangela iinethiwekhi, iya kusazisa nge-bar yesaziso ukuba kukho iinethiwekhi ezikhoyo kwaye ziya kuzidwelisa. Kuluhlu olwenziweyo siza kucofa kwinethiwekhi esifuna ukunxibelelana nayo. Ukuba uthungelwano lufuna iphasiwedi, siya kucelwa kwaye siya kukhunjulwa ngamanye amaxesha esidibanisa.
Ngeli xesha besele siza kuqhagamshelwa kwinethiwekhi ekhethiweyo yeWi-Fi, kodwa ukuba nje le nethiwekhi ayifuni i-IP yayo njengoko ihlala isenzeka kwiindawo zabucala okanye zeshishini. Njengomgaqo ngokubanzi kumaziko oluntu akuyomfuneko kodwa kunokuba kunjalo.
Ukuba i-IP iyafuneka ukunxibelelana nenethiwekhi kufuneka siye «imenyu - useto - uqhagamshelo ngaphandle kwamacingo- useto lweWi-Fi-kwimenyu-ephambili » kwaye apha ngenisa i-IP ehambelanayo kunye nezinye iinkcukacha eziyimfuneko ezinje ngesango, i-dns, njl. Kuya kufuneka senze onke la manyathelo ngokulinganayo kwaye sihlale sitshintsha i-IP ukuba kwenye indawo siza kufuna i-IP eyahlukileyo. Umzekelo, eofisini iya kudibanisa noqwalaselo oluthile kwaye endlwini yethu siza kudibanisa nolunye uqwalaselo.
Ukuthintela ukuba ungene rhoqo kuseto, kukho ezinye izicelo kwiNtengiso ye-Android ezilawula ezi ntlobo zonxibelelwano. Ndiza kuthetha nawe malunga ezimbini, Ukucwangciswa kwe-IP kunye neWifi Static.
1 Uqwalaselo lwe-IP
2 I-Wifi emileyo
Okwam ilungile kwaye ngale sicelo sinokumisela idatha eyahlukeneyo yokufikelela kwiinethiwekhi ezahlukeneyo esizisebenzisela ixesha elizayo sisebenzisa iwijethi ekhoyo ukukhetha ngonqakrazo apho sifuna ukudibanisa khona. Isicelo siya kutshintsha i-IP, kunye nayo yonke idatha eyimfuneko ebesiyiqwalasele ngaphambili, ukunxibelelana nale nethiwekhi. Isimahla.
Ukusetyenziswa kwayo kulula kakhulu, siyayiphumeza Uqwalaselo lwe-IP kwaye siqala ukumisela iinethiwekhi ngokunqakraza ku «imenyu-yongeza inethiwekhi entsha ». Kulapho iyakusicela khona idatha yenethiwekhi, njenge-IP, isango, imaski yenethiwekhi, i-DNS, igama lonxibelelwano kwaye sinokubeka i-icon eya kuthi iququzelele indawo ekuyo. Ngale ndlela silungiselela zonke esizifunayo.
Emva koko songeza iwijethi kwidesktop kwaye siyicinezela iya kusibonisa ukuhla kunye nazo zonke iinethiwekhi ezilungiselelwe, sicofa kwindawo oyifunayo kwaye iya kudibanisa nedatha ebonelelweyo. I icon iyatshintsha kuleyo siyabela inethiwekhi.
Umphathi we-IP we-Android kwi-AppBrain
Esi sicelo, njengangaphambili, sisivumela ukuba sitshintshe iinethiwekhi esele sizilungiselele idatha, kodwa ngokungafaniyo naleyo yangaphambili, le ayinayo iwijethi kwaye ukumiliselwa kwayo kucacile. Ukuqwalasela inethwekhi kuya kufuneka sidibaniswe nenethiwekhi, xa sixhunyiwe siqhuba isicelo kwaye ukhethe ukongeza ukucwangciswa. Siza kuya kwesinye isikrini apho kuya kufuneka sibandakanye idatha yenethiwekhi, ukuba ucofa kuimenyu - yenza », Ezi datha ziya kugcwaliswa kwaye ziya kugcinelwa unxibelelwano lwamva.
Senza le nkqubo kuzo zonke iinethiwekhi esizisebenzisayo kwaye sihlandlo ngasinye sisebenzisa i-Wifi ngaphakathi kwerediyo yenye yenethiwekhi emiselweyo, ifowuni iya kuthi iqhagamshele ngokuzenzekelayo nge-IP yazo kunye nenye idatha.
I-Wifi Static ye-Android kwi-AppBrain
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Lawula unxibelelwano lwakho kwinethiwekhi yeWi-Fi ngendlela elula nekhululekileyo
i-voip asterisk sitsho
Uninzi lwabantu, xa inkqubo ngokwayo yento esiyaziyo njenge-voip asterisk ivele, bonwabile ngayo ukuba le nto inokuba nkulu kakhulu. Ilungule
Oko kusilela ukuba ndiqaphele nge-Android yam. Ndaphoxeka kakhulu kuba i-iphone -Ipod inika ithuba lokumisela unxibelelwano kunye ne-IP yayo kunye nabanye, iSymbian ikwanika ukhetho, iMac inike ukhetho, iLinux inike ukhetho, kwaye iWindows kuphela (hayi ngoku) OS eyenza sukuvumela uqwalaselo ngalunye ngokwahlukeneyo. Ingcinga yam yokuqala: "I-DIOSSS, inkqubo esekwe kwiLinux eneebugs ezifana neWindows !!!". Ngethamsanqa kukho ii -apps zolu hlobo ezizama ukuyilungisa. Kodwa ndicinga ukuba kukusilela okukhulu kwe-OS kubaluleke njenge-Android.
Ithoni ye-DX sitsho
Kutheni le nto xa ndisebenzisa i-WiFi Static kwaye ndizama ukuyicwangcisa, ndifumana umyalezo othi "ulwazi alufumaneki!" Ngaba umntu unokundinceda ngale nto?
Phendula kwi-DX Tone